Indlela ejwayeleke kakhulu ngawo izingane afeze amasheke khona isifo sofuba, ngokuthi isiphuku. Okokuqala, Manta kungokwalabo izinyathelo esiyinhloko nokuvimbela isifo sofuba. Ngesisekelo i test immunological ekuboneni le khona noma ukungabi khona nomzimba sofuba ukutheleleka kwengane.
Ukuhlolwa kwenziwa wethula ukulungiselela ekhethekile - tuberculin, lomele allergen ukuthi kungabangela ukusabela iziguli. Tuberculin inhlanganisela isiko filtrate mycobacteria, owashona eneminyaka Ukushisa kwesikhashana futhi awayona ingozi emvelweni. I ekhiqizwa umjovo site, eyaziwa ngokuthi i-lula enesihloko esithi "Izinkinobho" isikhumba iqala ukuba othi awube. ububomvu kwesikhumba kubangelwa ukuvuvukala ethize kubangelwa lymphocyte kokuziphatha. I degree of ububomvu kuzoncika ekutheni umzimba kwaba kakade sofuba Mycobacterium noma cha. Uma ukubala mkhulu, futhi ububomvu uzokhanya, kodwa kukhona omuhle Mantoux test ezinganeni.
Nokho, ukuba khona nje ka imbewu eletha emzimbeni akusho ukuthi ingane uhlushwa isifo sofuba. Kungenzeka ukuthi i-positive Mantoux test ezinganeni is phetho BCG yokugoma ezenziwe ngaphambili. Lo mjovo reserves umzimba tubercle imbewu eletha yengane, okuyinto Ingabangela asabele kahle lapho uxhumana tuberculin.
Ukusabela Mantoux ezinganeni iyenziwa ngonyaka, kusukela lapho umntwana oyedwa unyaka ubudala. Small isipetu alahlwayo ngenaliti mncane is injected tuberculin ngaphansi kwesikhumba ingane. Kuyadingeka ukuba bagcine izinyathelo zokuphepha lapho ufeza test immunological - umjovo ngu umhlengikazi oQeqeshiwe ngezimvume ezifanele ukwenza imigomo, kuphela tuberculin qualitative in umthamo ngokuqinile kuchazwe ingasetshenziswa njengendlela reagent.
Mantoux test ezinganeni wenziwa ezindaweni zezempilo - emitholampilo nasezibhedlela, kanye pre-school kanye nezikhungo esikoleni. Uma ulandela yonke imithetho eyasungulwa ukunakekelwa kwezempilo Russian ke inqubo iphephile ngokwanele, isifo singalapheki ukuthuthukisa ngenxa kahle kwenziwe Mantoux test.
Ngemva kwamahora angu-72 isimo ihloliwe, futhi ubukhulu "izinkinobho" kuhloliwe Mantoux test ezinganeni. Amazinga akuyona yanda, futhi uzizwa ingane akusho ahlupheke. usayizi Sample futhi "izinkinobho" kuchazwa kahle 72 amahora.
Ayikho izimpawu ezikhethekile kokuphazamisa kungaqali Mantoux ukuphendula. Jwayelekile izingane anobukhulu kusuka 0 kuya 1 mm, lapho papule ku-intanethi.
Nokho, kwezinye izimo, le test Mantoux kuyinto enhle. Kulokhu, ubukhulu "izinkinobho" luyanda 5 mm noma ngaphezulu. Embodiments osayizi phakathi kwemingcele abekelwe emaceleni (kusuka 2 kuya ku-4 mm) bephoqeleka ukuba aqaphele isampula ngabazeka.
Bethambekele komzimba, izifo yamuva, pathologies ezehlukene isikhumba nozwela ngokweqile kungase kuthinte yi Mantoux test. Izingane ezingaphansi konyaka owodwa ungenzi ukuhlolwa ngoba nje wamasosha omzimba ebuthaka futhi ampofu, okungaholela Imiphumela olungalungile ezinjalo.
Ngemva tuberculin umjovo, isayithi umjovo ayikwazi wetted izinsuku ezintathu, akunakwenzeka ukuba unamathele smear zelenkoj noma kakhonkolo, akunakwenzeka ukuba ekuqaleni - zonke lezi imisebenzi futhi avuse yalokho engalungile. Ukuze uthole isithombe lesifanele, abazali kufanele eduze nokuqapha kwengane endaweni eyomile "izinkinobho", futhi esimweni izilonda ngemuva Mantoux test - nilimaza ukusingatha kuphela ngemva nokuhlola udokotela test onguchwepheshe.
Ngakho, ukusabela okuhle ekuhlolweni Mantoux akuyona inkinga njalo imbangela ekunakeni ingane itheleleke nge sofuba.
Perleches amakhona emlonyeni. Indlela ukuqeda lokhu isishayo?
"Lo Green Mile": abadlali nezinhlamvu
Kanjani ukwakha design egunjini ehostela?